Somaliland: Muwaadiniin si mudo dhaaf ah ugu xidhan xabsiyada Mandheera iyo Hargeisa mudo ka badan Saddex Sano .Xarunta Xuquuqal Insaanka | Salaan Media
Somaliland: Muwaadiniin si mudo dhaaf ah ugu xidhan xabsiyada Mandheera iyo Hargeisa mudo ka badan Saddex Sano .Xarunta Xuquuqal Insaanka
Somaliland: Muwaadiniin si mudo dhaaf ah ugu xidhan xabsiyada Mandheera iyo Hargeisa mudo ka badan sadex sano
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay ogaatay afar qof oo xidhnaa mudo dheer iyaga oo sugayey in dacwad lagu soo oogo. Maxamed Nuur Xirsi, iyo Maxamed Cabdi Xasan waxa la xidhay 14/1/2010 halka Shucayb Ardaale Warsame la xidhay 7/12/2011, sidoo kale Cabdishakuur Abiib Diiriye waxa la xidhay12/1/2012. Afartaas qof waxay xidhnaayeen inta u dhaxaysa sadex sano iyo lix bilood iyo sanad iyo lixbilood. Waxa laga soo kala qabtay Gebilay iyo Hargeisa.
Afartan qof waxa loo haystaa dhadcooyin ka dhacay degaanka u dhexeeya Gebilay iyo Boorama halkaas oo lagu laayay dad. Waxana lagu eedeeynayaa inay geysteen dil, budhcadnimo iyo kicin dadwayne.